बाध्यताले परदेशिनेहरुको समुन्द्रसँग कुनै मोह छैन.. – Tufan Media News
बाध्यताले परदेशिनेहरुको समुन्द्रसँग कुनै मोह छैन..
१७ फाल्गुन २०७७, सोमबार १९:२२
भोजराज घोडासैनी, सुर्खेत/हाल कोरिया ।
मनोरञ्जनका लागि विदेशिनेसँग घरको दुःख टाल्न परदेशिनेसँग जस्तो बाध्यता हुँदैन । मनोरञ्जनका लागि विदेश जानेहरू छुट्टै ‘क्याटागोरी’मा पर्छन् । उनीहरुलाई हामीसँग तुलना गरियो भने उनीहरूको आत्मसम्मानमा चोट पुग्छ । केवल मान्छे–मान्छे एकै हो भन्नेबाहेक अरू कुनै तर्क पनि त्यो क्याटागोरीको समूहसँग मेल खाँदैन ।
उनीहरू रहरले समुद्रको किनारमा पुग्छन् । डीएसएलआर क्यामरा, त्यो नभए आईफोनले फोटो खिच्छन् । महँगो होटेलमा बस्छन् । ब्रेकफास्ट, लञ्च, डिनरमा स्वादिष्ट व्यञ्जनको आनन्द लिन्छन् । बाध्यताले विदेशिनेहरुले वर्षौँसम्म पुग्न नसकेका ठाउँमा उनीहरू एकैदिनमा पुग्छन् । घरको दुःख पर सार्न विदेशिनेहरुलाई देखेर उनीहरू हुकुमी शैलीको भाषा प्रयोग गर्छन् ।
रोजगारीका लागि परदेश जानेको कथा मनोरञ्जनका लागि जानेको भन्दा ठिक उल्टो छ । उनीहरू देश छोड्नै नपरे हुन्थ्यो भन्ने ठान्छन् । परिवारसँगै बस्ने सपना बुन्छन् । हुन त यसलाई पनि के सपना भन्ने । तर हरेक साँझ सुत्दा निद्रामा उनीहरू देश पुगेर फर्किन्छन् । साँझ बिहान खाना खाँदा ‘परिवारसँग भएको भए’ भन्ने कल्पना गर्दै खान्छन् । बिसन्चो हुँदाको त झन् के कुरा गर्नु । त्यति बेला यो मन अस्पताल जान मान्दैन, आमाको काखमा गएर लुटपुटिन खोज्छ ।
बाध्यताले परदेशिनेहरुको समुन्द्रसँग कुनै मोह छैन । जसोतसो पुगिहाले भने पनि कठोर पीडा दबाएर फिक्का हाँसो हाँस्दै फोटो खिच्छन् । फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालमा राख्छन् । फोटो हेर्नेले रमाइरहेको छ भन्ने सोच्छन् । त्यही अनुसार कमेन्ट गर्छन्, मोज छ, ओहो, बबाल, सुन्दर…यस्तै यस्तै ।
अनि आफ्नो फोटोमा आएका कमेन्ट दोहोर्‍याए पढिरहन मन लाग्छ । त्यति बेला नवराज पराजुलीको कविताको अंश डुल्दै दिमागमा आइपुग्छ ।
‘कुनै देशको महान् चित्रकारलाई
विश्व नै रङ्ग्याउने रङ्ग चाहिए
मेरो देशको लालिगुराससँग सापटी माग्नु
तर यो कुरा पछि गरुँला कि,
मैले खाने चामलको रङ किन्न म अरब आएको छु ।’
यो कुरा कसलाई भन्ने ? कवि हृदयले महसुस गर्ने कुरा हो । जुन, नवराज पराजुलीले महसुस गरे । स्वाभिमानमा ठेस लाग्दा पनि सहन कति आत्मबल चाहिन्छ भन्ने कुरा ‘मोज छ’ भनेर फोटोमा कमेन्ट गर्ने मित्रले के जानुन् ।
देशले सम्मान नगरेकाहरूको परदेशमा कहाँको सम्मान हुनु ? परदेशमा त भाषामा नै विभेद हुन्छ । तराईबाट सामान बेच्न पहाड आउने मधेसी दाजुभाइलाई जस्तो । एउटै देशभित्र त विभेद हुन्छ भने विदेशमा नहुने कुरै भएन । त्यसको भुक्तभोगी हामी बाध्यताले विदेश जानेहरु हौँ ।
यहाँ हामीलाई आश्चर्यजनक नजरले हेर्छन् । घुम्ने ठाउँ पुग्दा त्यहाँ कुनै सम्मान हुँदैन । कुनै विशेष सेवा सुविधा हुँदैन । हेयको दृष्टिले हेर्छन् । उनीहरूले केही नभने पनि आफैँलाई हेपिएको जस्तो महसुस हुन्छ । इतिहासमा वीर गोर्खालीका नामले परिचित नेपाली, यसरी हेपिँदा पनि सहेर बस्छन् भने त्यो बहादुरी हो कि कायरता ? तपाईंलाई लाग्न सक्छ । तर यो मजबुरी हो ।
मेरो गाउँमा असार र मंसिरको खेतीपाती सकेर रोजगारी खोज्दै छिमेकी देश भारतको कालापहाड भन्ने ठाउँमा मौसमी कामदारको रुपमा जाने चलन छ । यसरी जानेहरु अनुहार बिगारेर टिठलाग्दो गरी बाटो लागेको देख्दा थुप्रै पटक मैले मेरो भविष्यको कल्पना गरेको थिएँ । त्यही कल्पना गर्दागर्दै म आज कोरिया आइपुगेको छु । मेरो गाउँबाट काम गर्न भारतको कालापहाड जानेहरु बस चढेर जान्थे । म यहाँ जहाज चढेर आएँ । जाने तरिका फरक भयो तर जानुपर्ने बाध्यता उही हो । पीडा उस्तै हो ।
कहिलेकाहीँ साथीभाइ आफन्तसँग कुरा हुन्छ । होइन, कुरा कम गुनासो बढी हुन्छ भनौँ ।
‘हामीलाई सम्झिनस्, ठुलो मान्छे बनिस् । देशको त के याद आउँछ होला र, ..’ यस्तै यस्तै भन्छन् । ती मेरा प्रिय साथीभाइ तथा आफन्तलाई म कसरी सम्झाऊँ कि मैले देशलाई कसरी सम्झिन्छु भनेर ?
मसँग त्यति शब्द कहाँ छन् जसको प्रयोग गरेर उनीहरुलाई म आफ्नो देशभक्तिपन बुझाउन सकुँ । कोरोना कहरले विश्व आतङ्कित हुँदा सरकार भन्दा पहिले आफूले खाइनखाइ जम्मा गरेको पैसा नेपाल पठाएको कसले ? २०७२ सालमा भूकम्प जाँदा परदेशका गल्ली गल्लीमा भिख माग्दै जुटाएकाे राहत रकम नेपालमा पठाउने को ? बेलाबेला प्राकृतिक विपत्ति आइपर्दा राहत जुटाउँदै प्रत्येक वर्ष कसले पठाउने गरेको छ ? राष्ट्र प्रेम के हो, म बुझ्दिनँ । आफैंले नबुझेको कुरा अरुलाई कसरी बुझाउन सकुँला ? तर यति चाहिँ भन्छु :
नहुँदा पनि योजना पूरा, देशको माया लाग्छ ।
जानि राख यत्ति कुरा, देशको माया लाग्छ ।
परदेशीले बिर्सी गयो कहिल्यै नभन्नु मित्र
जहाँ चलाए पनि पाखुरा, देशको माया लाग्छ ।।(उज्यालो अनलाईन बाट)
प्रतिष्ठानको आदेश मान्न तयार
नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने
विदेशबाट भिसा आएपछि काठमाडौं
‘सुटिङमा कैयौं मानिसहरुले ज’बरज’स्ती
जब एउटै चि’तामा बिदा